iPhone 8, 8 Plus နဲ့ X တို့မှာ “Hardware Update” ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့အတွက် CPU Throttling ပြဿနာ မရှိနိုင်ဘူးလို့ Apple ငြင်းဆန်
date_range 07 February 2018
visibility 820 Views
Apple တို့ရဲ့ iPhone Battery ပြဿနာက အခုအချိန်ထိအောင် မပြီးပြတ်နိုင်သေးဘူးလို့ ပြောရမှာပါ။ Battery Capacity နည်းသွားတဲ့ iPhone မော်ဒယ်အဟောင်းတွေမှာ CPU Throttling Feature ကို တိတ်တဆိတ် ထည့်သွင်းခဲ့တာကြောင့် အရင်လတုန်းကလည်း အီတလီ အစိုးရကိုယ်တိုင် Apple ကို စစ်ဆေးခဲ့ပြီး အမေရိကန်လွှတ်တော်ကလည်း Apple ကို မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
Apple Response to SCC Feb22018 by Kif Leswing on Scribd
ဒီနေ့မှာတော့ Apple က အမေရိကန်လွှတ်တော်က လွှတ်တော်အမတ် John Thune ရဲ့ မေးမြန်းချက်တွေကို စာတစ်စောင်နဲ့အတူ တရားဝင် ပြန်လည်ဖြေကြားလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ လွှတ်တော်အမတ် John Thune အနေနဲ့ Apple က တာဝန်ရှိသူတွေကို
“Apple အနေနဲ့ iPhone မော်ဒယ်သစ်တွေဖြစ်တဲ့ iPhone 8, 8 Plus နဲ့ X တို့အတွက်ကော iPhone မော်ဒယ်အဟောင်းတွေအတွက် ထုတ်ပေးထားတဲ့ CPU Throttling Feature ထည့်သွင်းပေးမှာလား? အကယ်လို့ ထည့်သွင်းပေးမယ် ဆိုရင်လည်း Apple အနေနဲ့ အသုံးပြုသူတွေကို ဘယ်လို အသိပေးမှာလဲ?”
လို့ မေးမြန်းခဲ့ရာမှာတော့ Apple က
“iPhone 8, iPhone 8 Plus နဲ့ iPhone X တို့မှာ မျှော်လင့်မထားပဲ ခဏ၊ ခဏ Shutdown ကျသွားတာမျိုးကို ကြိုတင်သိရှိ၊ ကာကွယ်နိုင်ပြီး အဆင်မြင့် Performance Management စနစ်ပါဝင်တဲ့ Hardware Update တွေ ထည့်သွင်းပေးထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် iPhone မော်ဒယ်လ်အဟောင်းတွေအတွက် ထုတ်ပေးထားတဲ့ CPU Throttling Feature ကို ထည့်သွင်းပေးစရာ မလိုပါဘူး။
နောက်ပြီး iPhone အဟောင်းတွေမှာလည်း အသုံးပြုသူအတွက် လိုအပ်တဲ့ Temperature Control and Warnings လိုမျိုး အခြေခံ Performance Management Features တွေလည်း ထည့်သွင်းပေးပြီးသားပါ”
ငြင်းဆန်တယ်လို့ ပြောရတာကလည်း အကြောင်းရှိပါတယ်။ Apple အနေနဲ့ ဒီပြဿနာ စဖြစ်ခါစတုန်းက သက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာ မီဒီယာတွေကို
“Apple အနေနဲ့ Battery မကောင်းတော့ရင် CPU Throttling လုပ်ပစ်တဲ့ Fix ကို iPhone7နဲ့7Plus ကနေ စတင်ပြီး iOS 11.2 နဲ့အတူ ထည့်သွင်းပေးနေပါပြီ။ မျိုးဆက်သစ် iPhone တွေမှာလည်း ဒီ Fix ကို ထည့်သွင်းပေးသွားဖို့ အစီအစဉ် ရှိပါတယ်”
လို့ ဖြေကြားခဲ့တာပါ။ အခုကျတော့ iPhone မော်ဒယ်သစ်တွေမှာ “Hardware Update” ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့အတွက် CPU Throttling ပြဿနာ မရှိနိုင်ဘူးလို့ ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် Apple ရဲ့ စကားတွေက ရှေ့သွားနောက်လိုက် မညီသလို ဖြစ်နေပါတယ်။
နိုင်ငံခြားက နည်းပညာ မီဒီယာတွေကတော့ Apple ကို ဖြေရှင်းချက် တောင်းခဲ့ကြပေမယ့် အကြောင်းမပြန်သေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။ Apple ပြောသလို iPhone မော်ဒယ်အဟောင်းတွေမှာ Performance Management Features တွေပါဝင်တယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့ ခဏ၊ ခဏ Shutdown ကျသွားတာလဲ? ဆိုတာရယ် iPhone မော်ဒယ်အသစ်တွေမှာ ထည့်ပေးထားတဲ့ “Hardware Update” ဆိုတာကရောဘာလဲ? ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တာလဲ? ဆိုတာတွေကတော့ မေးချင်စရာ မေးခွန်းတွေ ဖြစ်နေပါပြီ။
15 February 17
iCloud မှာ ကိုယ့်ရဲ့ Safari Browser History တွေကို မသိမ်းထားချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
by Alexander Wolfgang
16 February 17
Augmented Reality နည်းပညာကို စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ Apple CEO Tim Cook
အစ္စရေးအခြေစိုက် မျက်နှာဖတ်ရှုမှုနည်းပညာကုမ္ပဏီ RealFace ကို ဒေါ်လာ ၂ သန်းနဲ့ ဝယ်ယူလိုက်တဲ့ Apple
iOS Battery Lithium-Ion Battery Fix Battery Issue iOS 11 CPU Overclock Apple Hardware Issue iPhone iPhone 8 related news iPhone X iPhone 8 Plus
Storage ပမာဏ 30.72TB ပါဝင်ပြီး ၂.၅ လက်မသာ အရွယ်အစားရှိတဲ့ "ကမ္ဘာ့ Storage ပမာဏ အများဆုံး SSD" ကို Samsung မိတ်ဆက်
Samsung ရဲ့ Infinity Display ကို Galaxy A5 (2018) ဖုန်းနဲ့ Mid-Range Galaxy A စီးရီးမှာ စတင်မြင်တွေ့ရမည်
Chrome 632iBooks 1 Nexus 5X 1 Lenovo Vibe Pure UI 1 Rollable OLED Display 1 Instant Games 1 Imagination 1 Humanoid Robot 1 Atlas 1 Unity 3D studio 1